Nepal Dayari | विश्व प्र”सिद्ध फेशन डिजाइनर, ब्लगर एवम् लेखिका कि”र्जिदा रो”ड्रिग्जले क्या”न्सरबाट नि”धन हुनुअघि लेखेको नोट,पढ्नुस् हृ”दय छुनेछ( भिडियो सहित)
असार ९, २०७९ बिहिबार ४० पटक हेरिएको
विश्व प्रसिद्ध फेशन डिजाइनर, ब्लगर एवम् लेखिका किर्जिदा रोड्रिग्जले क्या”न्सरबाट नि’धन हुनुअघि ले”खेको नोट यस्तो रहेको छ।
१) दुनियाँको सबैभन्दा म”हंगो ब्राण्डका कारहरू मेरो ग्यारेजमा त्यसै थ”न्किएका छन् तर मलाई भने ह्विल”चेयरको प्रयोग गरिरहनु परेको छ ।
२) मेरो घर अनेकौं डिजा”इनका कपडा, जुत्ता, महँगा सरसामानले भरिएको छ तर मेरो श”रीर भने अस्पतालले दिएको एउटा छोटो पछ्यौरीले मात्र ढाकिएको छ ।
३) बैंकमा मेरो खाताहरूमा रहेको पैसा मेरो पैसा हुन् तर अब त्यो पैसा मेरो लागि कुनै कामको छैन ।
४) मेरो घर एक म”हल झैं छ तर म अस्पतालमा एक सानो आकारको बिस्तरामा पल्टिरहेको छु ।
५) म एक फाइव स्टार होटलबाट अर्को फाइव स्टार होटलहरूमा जाने गर्थें तर अब म आफ्नो समय अस्पतालमा एक प्रयोगशालाबाट दोस्रो प्रयोगशालामा जानका लागि बिताइरहेकी छु ।
६) मैले सयौं मानिसहरूलाई अटोग्राफ दिएकी छु तर आज डाक्टरहरूको प्रे”स्क्रिप्शन नै मेरो लागि अटोग्राफ भएको छ ।
७) मेरो कपाललाई सजाउनको लागि मसँग सातजना ब्यूटी”शियनहरू थिए तर आज मेरो टाउकोमा एउटा पनि कपाल छैन ।
८) म एक निजी जेटमा जहाँ चाहे त्यहाँ उड्न सक्थें तर अब मलाई अस्पतालको बरण्डामा जानको लागि पनि दुईजना मानिसहरू सहयोग लिनु पर्छ ।
९) विश्वमा कयौं प्रकारका खाद्या”न्नहरूमा मेरो प”हुँच छ तर अहिले मेरो आहार दिनमा दुई गोली र रातमा दुई थोपा तितो औषधि मात्र रहेको छ ।
यो घर, यो कार, यो जेट, यो फर्निचर, यति धेरै बैंक खाताहरू, यति धेरै प्रतिष्ठा र प्रसिद्धि, यिनीहरु अब मेरो लागि कुनै कामका छैनन् । यी मध्ये कुनैले पनि मलाई थोरै भए पनि आराम दिन सक्दैनन् । यिनीहरूले केवल दिन सक्छन् त केही प्यारा मानिसहरूको अनुहार र उनीहरूको स्पर्श !
साथीहरु, मृ”त्यु भन्दा अधिक सत्य केही पनि छैन अनि किन गर्छन् मान्छेहरू सम्पत्ति र पदको घमण्ड ?
स्रोत: सामाजिक सञ्जाल